Hong Kong: An’aliny maro ireo mpanao hetsipanoherana ilay lalàna miteraka resabe momba ny famindràna olomeloka no tonga nibahana ny làlana mankao amin’ny foiben-toeran’ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong: An'aliny maro ireo mpanao hetsipanoherana ilay lalàna miteraka resabe momba ny famindràna olomeloka no tonga nibahana ny làlana mankao amin'ny foiben-toeran'ny governemanta
Nandika (fr) i Global Voices en français
Voadika ny 19 Jona 2019 4:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, русский, Ελληνικά, English
Nobahanan'ireo mpanao hetsipanoherana ireo arabe manodidina ny foiben-toeran'ny governemanta mba hanakanana ny fandaniana ilay volavolan-dalàna famindràna olomeloka (extradition). Sary an'ny inmediahk.net, nahazoana alàlana.
Ny 12 Jona, an'aliny maro ireo mpanao hetsipanoherana nibahana ny sakelika rehetra manodidina ny foiben-toeran'ny governemanta sy ny antenimiera mpanao lalàna tao amin'ny distrika Admiralty mba hanakanana ireo mpitondra tsy ho afaka hanolotra ilay volavolan-dalàna avy amin-dry zareo. Tolodalàna hanovàna ilay volavolan-dalàna miteraka resabe momba ny famindràna olomeloka. Noho ireo solombavambahoaka tsy afaka tonga teny amin'ny tranoben'ny Filankevitra mpanao lalàna, nambaran'ny sekreterany fa ny fivoriana tokony ho natao tamin'ny 11 ora dia ahemotra ho amin'ny fotoana manaraka tsy voafaritra.
Just after Sunday's million-strong protest, the HK gov announced it would continue to push the #extraditionbill. The parliament is to debate it today & this is the people's way of stopping it.
Pic: Tanya Chan's FB pic.twitter.com/UUzeK0tSRp
— Venus Wu (@wu_venus) June 12, 2019
Tsy ny #HetsikaElo tamin'ny 2014 ity. Fa i #HongKong amin'izao tofoana izao.
Tena hoe taorian'ilay hetsika goavana be nahazo olona an-tapitrisa tamin'ny Alahady, nanambara ny governemanta ao Hong Kong fa hanohy ny fampandaniany an'ilay volavolan-daàna momba ny famindràna olomeloka. Tsy maintsy hiady hevitra momba izany ny parlemanta androany ary toy izao ny fomba fanakanan'ny vahoaka azy.
Ny fibahanana ireo arabe no nandimby ilay famoriambahoaka natao tamin'ny 9 Jona, izay nitondra olona nihoatra ny iray tapitrisa ho eny an'arabe hanohitra ireo fanitsiana natolotra ho an'ilay volavolan-dalàna (fanitsiana) ny lalàna mifandraika amin'ireo olomeloka any am-pandosirana sy ny fifanampian'ny rantsan'ny fitsaràna heloka bevava. Manome fototra araka ny lalàna ilay volavolan-dalàna ho an'ireo lehiben'ny mpanatanteraka sy ireo tribonaly ao an-toerana mba hijery arakaraky ny tranga tsirairay ireo fangatahana famindràna olomeloka nalefan'ireo manampahefana avy any Shina, ho any Taïwan sy Macao. Resy lahatra ireo mpanohitra fa ireo fanitsiana ireo dia hanamora ny fisamboran'i Shina ireo mpanakiana, mpanohitra, ary na ireo mpanao gazety avy ao Hong Kong aza.
Fotoana fohy taorian'ilay hetsipanoherana dia nanao fanambaràna ny governemanta nanipihany ny hoe hiroso amin'ny fanohizana ny famakiana fanindroany ilay volavolan-dalàna amin'ny 12 Jona. Tamin'ny 10 Jona, ny tsy fileferan'ny governemanta dia niteraka fiandonana mahery setra teo amin'ny polisy sy ireo tanora an-jatony nanao hetsipanoherana nifamory teo anoloan'ny Filankevitra mpanao lalàna.
10 Jona, fifandonana taorian'ny sasakalina. Loharanon'ny sary : Stand News. fampiasàna nahazoana alàlana
31 ireo mpanao hetsipanoherana no nosamborinì'ny polisy ary nalain-dry zareo kosa ny mombamomba ireo 358 hafa nijanona teo an-toerana taorian'ilay famoriambahoaka. 15 hatramin'ny 25 taona ny 80 % tamin'ireo.
Ny 10 Jona, nanohy niaro ilay volavolan-dalàna i Carrie Lam lehiben'ny mpanatanteraka, tamin'ny fisisihany nilaza hoe manana “adidy amin'ny fanentsenana io banga io”i Hong Kong . Ny filohan'ny mpanao lalàna indray, Andrew Leung, nanapaka ny hoe tsy maintsy manome ny heviny alohan'ny 20 Jona momba ilay lalàna maha-be resaka ireo mpanao lalàna.
Ny mpikararaka ny famoriambahoaka tamin'ny Alahady, ny Mandatehezana Sivily Mpiaro Zon'Olombelona dia niantso ny hanaovana hetsipanoherana iray vaovao manomboka ny 12 Jona eo anoloan'ny foiben-toeran'ny governemanta mba hanangolena ity andrimpanjakana ity. Ireo fikambanan'ny mpianatra avy amin'ireo toeram-pianarana ambony miisa fito, ahitàna ny Oniversite Shinoa sy ny Oniversita Batista, dia nanasa ireo mpianatra mba hibodo ny fampianarana sy hanjohy ny famoriambahoaka. An-jatony ireo mpampiiasa ao Hong Kong avy amin'ny sehatra rehetra no nirotsaka tamin'ny, na fampiatoana ny asan'izy ireo, na ho fanohanana ny mpiasany nanapaka hevitra ny hanao fitokonana.
Ny 11 Jona, 2.000 teo ho eo ireo mpanao hetsipanoherana no nitangorona teo ivelan'ny Filankevitra mpanao lalàna, ary ny ampitso maraina dia tonga nanatevina laharana an-dry zareo ireo hafa an'aliny marobe . Vao tamin'ny 8 ora, an'aliny ireo mpanao hetsipanoherana no nibodo ireo sakelika marobe tena fampiasa (ny làlana Lung Wo sy Harcourt ) manodidina ny tranoben'ny Filankevitra mpanao lalàna. Jerome Taylor, lehiben'ny biraon'ny AFP miandraikitra an'i Hong Kong/Taïwan/Macao, nitatitra tao amin'nyTwitter hoe:
— Jerome Taylor (@JeromeTaylor) June 12, 2019
Naparitaka indray ny fitsifotra misy dipoavatra
— Jerome Taylor (@JeromeTaylor) 12 Jona 2019
Raha nahavita nanemotra ny fivoriana nokasaina hatao ny 12 Jona maraina ireo fanakanana nataon'ny mpanao hetsipanoherana, ny fitsipika mifehy ny Antenimiera dia manome alàlana ny filohan'ny Filankevitra mpanao lalàna hanohy ny fivoriana, ao anatinà fepotoana fiantsoana tsy misy afa-tsy ora iray monja.